▷ F1 TV: Waa maxay, waxa ku jira, qiimaha iyo sida loo helo - 【 LaComparación 】 2022
F1 TV: waa maxay, waxa ka mid ah, qiimaha iyo sida loo helo
Telefishinnada | 0 Comments
Xilliga 2021 ee Formula 1 wuxuu ballanqaadayaa inuu noqdo mid xusuus leh, isagoo F1 TV ka dhigaya adeegga qulqulka isboortiga adeeg muhiim u ah dadka jecel motorsport.
Siinta daawadayaasha caynsanaan dhammaystiran oo maalmaha jinsiyadda ah, fadhiyada ku celcelinta, xirmooyinka iyo waxyaabo badan oo F1 ah oo gaar ah, akhri tilmaantayada buuxda ee isticmaalka F1 TV online iyo TV-gaaga.
Hada waxaa laga heli karaa wadamo ka badan sidii hore, barnaamijka adeegga ayaa sidoo kale helay dib u habeyn weyn xilli ciyaareedka cusub, oo leh daboolid lagu bixiyo Full HD iyo marin u helista muuqaallo badan oo kayd ah.
Akhri si aad wax badan uga ogaato F1 TV. Waxaan ku siin doonaa fikrad wanaagsan oo ku saabsan waxa ku jira, inta ay ku kacayso iyo sida aad u soo gudbin kartaa dhammaan xilli ciyaareedkan tallaabo Formula 1 ee F1 TV.
1 Waa maxay F1 TV iyo F1 TV Pro?
2 Xagee ka daawan karaa F1 TV iyo F1 TV Pro?
3 Immisa ayey ku kacaysaa F1 TV oo ma bixisaa tijaabo bilaash ah?
4 Sidee loo daawadaa TV-ga F1?
5 Sideen TVgayga uga daawadaa?
6 Xagee ka daawan karaa F1?
Waa maxay F1 TV iyo F1 TV Pro?
F1 TV waa adeegga qulqulka gaarka ah ee FIA ​​Formula 1 World Championship. Waxaa laga heli karaa 85 waddan oo kala duwan, adeeggu wuxuu ku yimaadaa laba heerar oo kala duwan:
F1 TV Pro waa bixinta khidmadaha adeegga waxayna siisaa macaamiisha caymiska tooska ah ee dhammaan tartamada Formula 1 ee xilli ciyaareedka. Waxaa intaa dheer, waxaad sidoo kale u daadi kartaa kulan kasta oo raadraac ah dhammaan GP-yada oo aad geli kartaa dhammaan kamaradaha dusha sare ee darawallada iyo raadiyaha kooxda, iyo sidoo kale Hel baahinta tooska ah ee F2, F3 iyo Porsche Supercup.
Mid kale oo gaar u ah macaamiisha F1 TV Pro ayaa ah adeegga wakhtiga tooska ah ee cajiibka ah, kaas oo kuu oggolaanaya inaad aragto telemetry wakhtiga dhabta ah iyo taariikhda isticmaalka taayirka darawalka ee xilliga jinsiyadaha.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya heerka helitaanka TV-ga F1 oo aad uga jaban ayaa ah inaysan ku jirin caymiska tooska ah, laakiin ay bixiso dib-u-soo-celin iyo waxyaabo muhiim ah oo ku saabsan baahida.
Labada heerba waxay bixiyaan helitaan dalab ah oo ka badan saacadaha 2,000 ee fiidyowga F1, iyada oo laga helayo Grand Prix kasta tan iyo 1981.
Xagee ka daawan karaa F1 TV iyo F1 TV Pro?
F1 TV Pro wuxuu ku bixiyaa baahinta tooska ah lix luqadood oo ku yaal dhulalka 85. Si kastaba ha ahaatee, heshiisyada xuquuqda TV-ga gaarka ah ee wadamada qaarkood waxay la macno tahay in heerka sare ee F1 TV Pro iyo daboolidiisa tartanka tooska ah aan laga heli karin meel kasta, oo kaliya Helitaanka heerka F1 TV ayaa laga heli karaa gobolladaas.
Tusaale ahaan, F1 TV Pro waa laga heli karaa Maraykanka iyo Kanada, laakiin maaha gudaha UK iyo Ireland, mahada iska leh Sky's bust deal with the FIA. Sidoo kale, F1 TV Pro lagama heli karo Australia, New Zealand, Spain ama Germany.
Waxaad ku ogaan kartaa caynsanaanta laga heli karo F1 TV aaggaaga adigoo gujinaya aquí.
Immisa ayey ku kacaysaa F1 TV oo ma bixisaa tijaabo bilaash ah?
Qiimaha F1 TV waa kala duwan yahay gobol ilaa gobol. Gudaha Mareykanka, F1 TV Pro wuxuu hadda qiimihiisu yahay 79 Yuuro hal sano oo isdiiwaangelin ah, iyadoo F1 TV Access uu qiimihiisu yahay €26,99 sanadkii.
Adeeggu wuxuu kaloo bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah oo F1 TV Pro ah oo lagu xulanayo waddammo xul ah, oo ay ku jiraan Mareykanka.
Sidee loo daawadaa TV-ga F1?
Way fududahay in la bilaabo daawashada dhammaan bandhigyada tartanka baabuurka ee TV-ga F1. Ka bilow inaad booqato shabakada adeega, dooro gobolka saxda ah, oo aad saxiixdo ama ka faa'iidaysato tijaabadan bilaashka ah.
Adeeggu wuxuu bixiyaa apps u go'ay inta badan aaladaha waaweyn sida Apple, Android, Roku iyo Amazon Fire App.
Adeegga sidoo kale waxaa laga daawan karaa kombuyuutarka iyada oo loo marayo dhammaan daalacashada shabakadaha waaweyn.
Sideen TVgayga uga daawadaa?
Hadda F1 TV wuxuu bixiyaa daboolkiisa quruxda badan ee 1080pWaa wax laga xishoodo in adeeggu uusan hadda u soo bandhigin apps u go'ay TV-yada smart ama xitaa Apple TV.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan lama lumin. Kuwa xiiseeya powersports ee raba dareenka soo jireenka ah ee ku fadhiista sariirta iyagoo daawanaya dhammaan caaggaas kulul, Waxay sidoo kale ka qulquli karaan F1 TV browserka iyagoo isticmaalaya Apple Airplay ama Google Chromecast, oo kuu ogolaanaya inaad wax walba ku aragto shaashadda.
Xagee ka daawan karaa F1?
Sida la sheegay, dhammaan gobollada ma haystaan ​​xirmo TV F1 ah oo leh caymiska tooska ah ee Grand Prix, marka laga reebo UK, Ireland iyo Australia. Ka dib hubi hagahayaga u heellan helitaanka F1 baahinta tooska ah, si aad u hesho macluumaadka ugu fiican gobolladaada.
Kuwa raadinaya inay arkaan dhammaan ficillada sida Down Under u dhaco waxaa u adeega Fox Sports, oo leh xuquuqda baahinta tooska ah ee xilliga 2021 gudaha Australia. Haddii aadan Fox u haysanin qayb ka mid ah xirmadaada TV-ga mushaharka ah, betka kuugu fiican ayaa laga yaabaa inuu noqdo inaad iska diiwaan geliso walaasheed, adeegga qulqulka ciyaaraha ee Kayo Sports.
Waxa ugu wanaagsan oo dhan, Kayo waxay bixisaa BILAASH tijaabo ah laba toddobaad!
Intaa ka dib, Xirmada aasaasiga ah ee Kayo Sports qiimaheedu waa €25 bishii waxayna u ogolaataa isticmaalayaasha inay ku qulqulaan laba qalab isku mar. Adeeggu wuxuu kaloo bixiyaa qorshe Kayo Sports Premium, kaas oo bixiya saddex ilbiriqsi isku mar ah €35 bishii.
Waxaad ka daawan kartaa dhammaan 1 F2021 GP-yada UK iyo Ireland adigoo isticmaalaya Sky Sports iyo kanaalka Sky Sports F1 ee u heellan.. Macaamiisha waxay sidoo kale ku daawan karaan socodka iyagoo isticmaalaya Sky Go app, oo laga heli karo ku dhawaad ​​dhammaan taleefannada casriga ah, tablet-yada, laptop-yada, PC-yada iyo consoles-yada.
In kasta oo Mareykanka iyo Kanada ay si fiican ugu adeegeen TV-ga F1 oo si toos ah ugu tebinaya jinsiyadaha labada gobol, daawadayaasha labada dalba waxay sidoo kale leeyihiin ikhtiyaar ay ku daawan karaan weriyeyaasha toosan ee tooska ah.
Xilliga 1 F2021, ESPN waxay bixin doontaa caymis buuxa gudaha Mareykanka. Xadhkaha gooya sidoo kale nasiib bay leeyihiin maadaama aad heli karto ESPN iyada oo aan la haysan xidhmo qaali ah oo fiilooyinka iyada oo loo marayo bixiyeyaasha waaweyn sida Sling TV iyo fuboTV.
Dhanka kale, gudaha Kanada waxaad ku daawan kartaa tartamada F1 2021 TSN oo Ingiriis ah ama RDS oo Faransiis ah., laakiin kuwani waa kanaalo qaali ah oo inta badan la socda xirmo TV-ga lacagta lagu bixiyo.
Haddii aad ku hesho iyaga oo qayb ka ah qandaraaskaaga fiilada, waxaad awoodi doontaa oo keliya inaad la gasho faahfaahinta bixiyahaaga oo aad marin u hesho socodka tooska ah ee F1.
Haddii aadan haysan fiilada, Waxaad iska qori kartaa TSN ama RDS streaming ka kaliya CA$4,99 maalintii ama (qiimaha aad uga wanaagsan) CA$19,99 bishii.
Ma jeceshahay codka F1 TV? U gudub shabakada hadda, is-diiwaangeli, oo bilow daawashada!